Ama-GPS Trackers Wezingane Nengane ene-Autism - Izixazululo ze-OMG
I-Tag: izingane ezine-autism, izidingo ezikhethekile zezingane, i-gps tracker yezingane, i-gps tracking device, i-tracker yezingane, ithuluzi lokulandela izingane, i-tracker yezingane
Izingane ezine Autism nezinye izidingo ezikhethekile zingezona ezomlomo futhi zingaba nobunzima bokuxhumana nabantu. I-OMG GPS Tracker iyisixazululo sokuqapha esenzelwe autism abazali. Lapho ingane ene-Autism izulazula, umzali angavele abheke indawo ku-App elandwe ku-Smartphone. Asikho isidingo sokuqala ukubiza amaphoyisa noma omakhelwane bezama ukuthola ingane elahlekile.
Ngosizo luka Ubuchwepheshe be-GPS lawa mawashi ayakwazi ukutshela indawo yengane ngezinga elimangalisayo lokunemba. Usebenzisa i-App ku-Smartphone yakho, umane ukhiphe imephu futhi uzokwazi ukubona indawo ngqo yengane.
Amawashi nawo angathola imilayezo yezwi, okusho ukuthi abazali bangarekhoda umyalezo wezwi bese bebuza ngokuthula i- ingane ene-autistic ukubuyela ekhaya.
I-GPS059D - I-OMG yezingane / i-Elderly SOS Button GPS Tracker
I-GPS054D - I-OMG GPS Pendant Tracker (i-Dementia Asebekhulile Nezingane) (Akukho Okubhaliselwe Kwanyanga Zonke)
I-GPS037D - I-GPS Anti-Lost Tracker Pendant ye-Autism / Autistic Izingane / Izidingo Ezikhethekile Zomntwana
I-GPS043D - I-GPS Tracker Pendant ye-Autism Autistic Kids / Izidingo Ezikhethekile Zengane
I-GPS014D - I-OMG GPS Pendant Tracker yeDementia Asebekhulile Nezingane - AKUKHO Imali Yanyanga zonke
iHelp 2 - GPS Tracking Keychain, Waterproof, Motionless & fall Detection (Asebekhulile abane-Dementia)
I-GPS032W - I-OMG engenamanzi i-4G GPS Tracker Izingane Zokubuka Ucingo
I-GPS029W - I-OMG GPS engangeni manzi yezingane
Ukubuka okuphelele kwe-4088 Ukubuka kwe-3 Namuhla